FBI को Most Wanted मा परिएला है About
FBI को Most Wanted मा परिएला है By Aakar Anil
गतहप्ता अमेरिका को Federal Bureau of Investigation (FBI) ले ओशामा विन लादेन भन्दै अरु नै व्यक्ति को तस्विर सार्वजनिक गरेको छ ।
संसार मै अत्यन्त शक्तिशाली गुप्तचरी संस्था मानिएको FBI ले सबैभन्दा पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेर ओशामा विन लादेन भन्दै स्पेन का राजनितिज्ञ Gaspar Llamazares को फोटो सार्वजनिक गरेको छ । FBI ले ओशामा भनेर सार्वजनिक गरेको फोटो आफ्नो फोटो रहेको थाहा भएपछि Gaspar Llamazares ले FBI को यो कदमलाई एकदमै लज्जस्पद भनेर टिप्पणी गरेकाछन् भने आफूलाई अमेरिका ले Most Wanted को सुचि मा राखेर असुरक्षित गराएको बताएकाछन् ।
ओशामा भनेर उनको फोटो सार्वजनिक गरेपछि उनलाई खुलेआम हिँड्न गाह्रो परेको तथा असुरक्षित महशुस भएको कुरा Gaspar Llamazares ले बताए । FBI ले आफ्नो फोटोलाई अलिकति अल्टर गरेर, ओशामा को तस्विर भन्दै देखाउनुलाई एकदमै आपत्तिजनक र लज्जास्पद बताएकाछन् । स्पेन का ५२ वर्षिय Gaspar Llamazares, United Left coalition का भुतपुर्ब नेता भन्छन “पहिलो पल्ट मलाई मेरो र लादेन को फोटो दुरुस्त भन्दा पत्यार लागेको थिएन” । Gaspar Llamazares भन्छन्, मेरो फोटो कपि पेस्ट गरेर तयार पारेको लादेन को नयाँ फोटो चिनिहालेँ । FBI ले "cutting edge" technology को प्रयोग गरेको भन्दै गर्दा Gaspar Llamazares ले भने अमेरिका को वरिष्ठ निकाय FBI ले तल्लो स्तर को काम गरेको भन्दै यसले आफूलाई हिँड्न गाह्रो परेको बताएकाछन् । यो फोटो सार्वजनिक भएर लादेनलाई त केही असर गर्ने छैन तर मलाई भने असुरक्षित गराएको छ, उनले भने । उता FBI का प्रवक्ता ले भने, गल्ति भएको स्विकार्दै Forensic Artists लाई ईन्टरनेट बाट डाउनलोड गरेको फोटो स्पेनिश नेता को हो भन्ने थाहा थिएन ।
लौ ! अब हेर त ईन्टरनेट मा आफ्नो फोटो अपलोड पनि गर्न नहुने भो ! हुन त बेला बेला मा ईन्टरनेट मा अपलोड गरिएको फोटो को अनधिकृत प्रयोग भइरहेको छ तर त्यसमध्ये पनि FBI ले सार्वजनिक गरेको यो फोटो ले त कुन चाँहि को आङ सिरिङ्ग बनाउँदैन होला । आफ्नो फोटो, कुनै आतंकवादी संगठन कै नाइके को फोटो भनेर सार्वजनिक गर्दा Llamazares लाई के भयो होला भन्ने कुरा प्राय हामीहरु को अनुमान बाहिरै होला । उनलाई यस्तो भयो अब अरुलाई यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । हाम्रै नेपाल मा पनि अहिले शसस्त्र समुह को संङ्ख्या ३ दर्जन पुगिसकेको छ, अब कुन दिन सरकार ले मोस्ट वान्टेड सुचि बनाउने थाहा छैन । के थाहा, त्यतिखेर हाम्रै फोटो पो सार्वजनिक गर्ने हो कि बा !!!
reference: BBC - Spanish MP's photo used for Osama Bin Laden poster
SJanuary 18, 2010 at 5:55 PMI have also read this news in BBC's website...and was shocked ....Actually it is rubbish that people's picture are used like that...There is no security....at all and with this incident its so Shocking...because it is FBI...ReplyDeleteametyaJanuary 19, 2010 at 12:01 AMएक चोटी India मा केटोले मन पराएकी केटीले Reject गरिदिनाले केटाले केटीको फोटो र मोबाईल नं orkut मा upload गरेर call girl भनेर बदनाम गराएको थियो । यि त अपवाद हुन् । हातमा digital camera र साथमा facebook हुने बितिकै हामी photo upload गर्न हतारिहाल्छौ । यस्ता अपवाद तिर हाम्रो ध्यान नै जादैन ।ReplyDeleteAdd commentLoad more...